နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » Transformers Truck ကား
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Transformers Truck ကား
ဖေါ်ပြချက်: Transformers လူသားကိုကူညီနှင့်ငါတို့အပြေးပြိုင်ပွဲကိုကယ်တင်, သငျသညျကိုအမေရိကန်စစ်စခန်းမှကုန်စည်အားလုံးပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ Autobots Roll Out!
ကစား: 206,115 tag ကို: transformers, robot, ကုလဲလှယ်ခြင်း
သင်သည်သင်၏ destination သို့ရောက်ရှိသည်အထိမိမိလမ်းသို့မိမိရပ်သောအတားအဆီးများအကြားပျံသန်းသတ္တုမြို့အနားမှာတစ်ဦးစွန့်စားမှုရင်ဆိုင်ဖို့စက်ရုပ်စက်ရုပ်ကိုကူညီပါ။ တစ်ခုတည်းပျက်ကွက်နှင့်သင့်မစ်ရှင်ကျရှုံးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရီစရာအထိမ်းအမှတ်မထားပါနဲ့။
ပုံမှာပဟေဠိဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်လဲလှယ်ရေး, လည်သို့မဟုတ် Clear ကို: Transformers ဂိမ်းကို Transformer Prime ပဟေဠိဂိမ်း Play ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်နှင့်3ရွေးချယ်စရာကနေရွေးချယ်ပါ။
Transformer buble ပျားကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်
သငျသညျအခမဲ့အဘို့သင့် browser မှာ Transformer Buble ပျားကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ Transformer Buble ပျားကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်: bumble ပျား autobots နှင့်အတူစစ်တိုက်နေစဉ်အတွင်းလေးနက်သောဒဏ်ရာရတယ်, သူ့ခြေထောက်ကျိုးသည်။ ဆမ်ထရပ်ကားနှငျ့အတူသူ့ကို tows နှင့်ရောက်စေဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
သင့်ရဲ့အလုပ်မစ္စတာခုန်စက်ရုပ်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်စက်များအတွက်ဒုက္ခစာလုံးပေါင်းနိုင်ကြောင်းဘာမှမရှောင်ရှားအနေဖြင့်အဆင့်တိုင်းတဆင့်ခုန်များနှင့်ရဲအပြာမိတ်ဆွေအတွက် blobs ကိုစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို Hop!
Iron Man စစျပှဲ! ပျော်စရာရှိသည်!
အခြားဂြိုဟ်မှစက်ရုပ်သေစားသေစေသော Iron Man ရဲ့စက်ရုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ခန့်အပ်ခဲ့သည်, နယူးယောက်မြို့သိမ်းပိုက်ဖို့ကမြေကြီးကိုစေလွှတ်။ , Iron Man ဂိမ်းလွန်အားလုံးအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သေစားသေစေသော၏ဤမစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ကိုကူညီပေးပါ။
ben 10 စက်ရုပ်ကျူးကျော်
မြေကြီးဂြိုလ်သားစက်ရုပ်၏ဆင်းသက်ပြီးနောက်ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ဘင်အားလုံးကျူးကျော်စက်ရုပ်ကမ္ဘာကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ကြဉ်းဖျက်ဆီးဖို့မစ်ရှင်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဘင်သည်သူ၏တာဝန်ဖြည့်ဆည်းကူညီရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။
အ Autobot Optimus ချုပ်အဖြစ် Play နှင့် Decepticons နောက်ကျောကိုတိုက်! သင့်ရဲ့လက်နက်တွေသူတို့နှင့်အတူဆင်းရိုက်, သင့်လက်နက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ရန်သူလှိုင်းတံပိုးကိုပြန်ကိုင်ဖို့ပိုက်ဆံစုဆောင်းခြင်း, finish ကိုမှရှေ့ဆက်တွန်းအားပေး!
သငျသညျ Optimus Prime ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤပြိုင်ကားအလမ်းနှင့်ခါးဆစ်နှင့်အတူသတိထားမှစွမ်းအင် game.Get အနိုင်ရ။
ben 10 တပါးဗုံးထရပ်ကား
သူတို့ကိုကျဆင်းနေထွက်နှင့်အတူလမ်းရဲ့အဆုံးမှဗုံးခေါ်ထုတ်ရန် ben 10 ကိုကူညီပါ
ထရန်စဖော်မာ xmas ပြိုင်ကား
Xmas Day ကို။ Optimus ချုပ်ရဲ့ moto ကြိုးစားပါနှင့်ထိ မိ. လဲစရာမလိုဘဲအတားအဆီးကျော်ခုန်။ ထိန်းချုပ်နေပါနဲ့မြှား keys တွေကိုသုံးပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုနှိပ်ပါ။
ဤသင်တန်းများကျော်ဒီ Monster Truck ကားမောင်း, ဒါပေမဲ့အဲဒီ horrid ဖုတ်ကောင်သငျသညျအရလာမယ့်အထဲကထွက်သည်ကိုစောင့်ကြည့်! သူတို့ကိုနှိမ့်ချကြလော့
တိုက်ခိုက်ရေး allspark ထရန်စဖော်မာ
စစ်တိုက်ခြင်းမှ၎င်း၏အချိန်! အ decepticons တစ်ကမ္ဘာလုံးယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံး autobot ကောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အထိ3အဆင့်တဆင့် decepticons ကိုတိုက်! သင်ဂိမ်းတစ်ခု refresh ရန်, စာနယ်ဇင်း F5 key ကိုဆက်လက် button ကို click နှိပ်မရနိုင်မယ်ဆိုရင်
အ bumble ပျား၏ထရန်စဖော်မာလေယာဉ်ခရီးစဉ်
Decepticons ၏တစ်ဦးကအမွေးကြမ်းတစ်ချောက်မှာကင်းထိုးပျားပိတုန်းပိတ်မိနေကြပြီ။ ရှင်သန်စေရန်, ပျားပိတုန်း Energon များအကြီးအကျယ်ငွေပမာဏကိုစုဆောင်းနှင့်သူ၏ Decepticon ရန်သူများကိုတစ်အားဖွငျ့တစျအနိုင်ယူဖို့အာဏာကိုအသုံးပြုရပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လ-အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ရန်နှင့်တပါးစက်ရုပ်အသိုက်ကိုဖကျြဆီး! အမာခံသူမြားအတှကျပေါ့ပေါ့ကစားသမားများနှင့် Survival mode ကိုများအတွက်ကင်ပိန်း mode ကို။
Rex ထရပ်ကား Champ vs ben 10
Rex ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ထရပ်ကားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မောင်းနှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်ဖို့ 1st ရာဌာန၌အဆင့်အတန်းပြီးအောင်, လာဘျကောငျး။
SpongeBob ရေမျော2ပေါက်ကွဲ
SpongeBob သူသည်မိမိအထရပ်ကားကိုမောင်းနှင့်ရေမျောများနှင့်အခြားမိကျောင်းအပြည့်အဝပါသောကမ္ဘာမှတဆင့်သွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်မှာအခြားအကြီးအစွန့်စားမှုနှင့်အတူနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိကမစ်ရှင် Jelly ဖမ်းအပေါင်းတို့နှင့်အတူမိကျောင်းကိုသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထရပ်ကားဂရမ်သုံးတဲ့အခါပက်ထရစ် hit
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်, သဲကန္တာရအတားအဆီးများနှင့်သဲရိုးမှတဆင့် Racing သင်အဆုံးမှီတိုင်အောင်မောင်းထုတ်နိုင်သနှင့်ဗုံးလမ်းမကြီးနှင့်အတူရှင်သန်ဒီဂိမ်းထဲမှာ Optimus ချုပ်ရှိပါသလဲ လူအပေါင်းတို့သည်အဆင့်ဆင့်အနိုင်ရမှအခြားအဆင့်အထိ Play နဲ့သော့ဖွင့်!
သငျသညျဒီဂိမ်းထဲမှာ Optimus ချုပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး Harley-Davidson မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခြင်း, moutain တဆင့်ဒီစိန်ခေါ်မှုခရီးကို ယူ. လူအပေါင်းတို့သည်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ဖို့ကြိုးစားပါ။
အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန် 3D ပြိုင်ကားဂိမ်း။ သင့်ရဲ့နဂါးထရပ်ကားအတွက်ကမ္ဘာတလွှားခရီးသွားအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားပါ။